Kedu ihe kpatara njikọ mmetụta uche ga -eji bụrụ ihe ịga nke ọma n'ịre ahịa oge ezumike a | Martech Zone
Kedu ihe kpatara njikọ mmetụta uche ga -eji bụrụ ihe ịga nke ọma n'ịre ahịa oge ezumike a
Wednesday, October 20, 2021 Wednesday, October 20, 2021 Thea C. Myhrvold
N'ime ihe karịrị otu afọ, ndị na-ere ahịa anọwo na-emeso mmetụta ọrịa na-efe efe na-ere ahịa ma ọ dị ka a na-atụ anya n'ahịa ahụ ka ọ ga-eche oge ịzụ ahịa ezumike siri ike ihu na 2021. Nrụpụta na mmepụta ihe na-akpata ọgba aghara na-aga n'ihu na-emebi ikike idobe ngwa ahịa. dabere na ngwaahịa. Usoro iwu nchekwa na-aga n'ihu na-egbochi ndị ahịa ịme nleta ụlọ ahịa. Na ụkọ ọrụ na -eme ka ụlọ ahịa na -ama jijiji ma a bịa n'ịrụ ndị na -agafe agafe. Ọ nweghị nke a bụ ozi na -atọ ụtọ ma ọ bụ ozi na -enwu enwu maka atụmanya ahịa oge ezumike.
N'agbanyeghị amụma ọjọọ ahụ, enweela ọtụtụ nkwalite na ahụmịhe ịzụ ahịa azụmaahịa. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa enweela ihe oriri amụrụ site na oria ojoo dị ka mbubata mbata, ịkwụ ụgwọ enweghị kọntaktị, na nnyefe otu ụbọchị. Atụmatụ ndị a na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ndị ahịa na-anabata ha nke ọma. Mgbe onye na-ere ahịa dị njikere ime mgbanwe ma soro ndị na-azụ ahịa rụọ ọrụ iji mee ka ahụmịhe azụmaahịa na-ejighị n'aka ka mma na nke a na-ejikwa, onye ọ bụla na-emeri. N'ebe a na-ere ahịa, ụdị mgbanwe ahụ na-egosi na ọ bụ ọmịiko nke ndị na-azụ ahịa, ọ bụghị ọnụ ahịa kacha ala, nke nwere ike mechaa nweta ire ere ahịa.
Ọmịiko ndị ahịa abụghị ihe ọhụrụ. N'ezie, pasent 80 nke ndị na-azụ ahịa na-adabere mkpebi ịzụ ahịa ahịa ha na mmetụta uche.
Deloitte, Na-achọpụta uru itinye aka na mmetụta mmetụta
Kedu mmetụta ha na -enwe maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ a, otu esi enye ya ya, yana mmetụta ha n'ebe onye na -ere ahịa na -enye ya. Ime njikọ n'etiti ndị ahịa abụrụla ihe dị mkpa na ire ahịa, mana n'oge ihe ịma aka dị ka nke a, inwe ọmịiko na inwe ezi mmetụta mmetụta na ndị ahịa nwere ike inye ụlọ ahịa gị oke asọmpi ọ chọrọ.
Anyị ahụworị ọzọ-gen ọmịiko na -abanye ngwakọta na mpụta nke nkata nkata n'ịntanetị, ndepụta nkwenye, na ndị enyemaka ịzụ ahịa mebere. Ọgụgụ isi na akpaaka nke ọrụ ndị ahịa na-eme ugboro ugboro emewo ka ahụmịhe ịntanetị dị mma, mana oke arụmọrụ ha na-ejedebe naanị na okwu nkịtị, dị mfe nghọta. Ikike ha nwere ịkwalite na imechi ahịa abụrụla obere ihe. Ọ dị ka chatbots dị mma n'ịgụ edemede ma ha enwebeghị ezigbo ya persona nke ahụ ga-eme ka ha nwekwuo mmekọrịta - na ọkwa mmetụta uche, ọbụlagodi.
Nke ahụ kwuru, otu mpaghara mmetụta ọmịiko yiri ka ọ na -arụ ọrụ nke ọma ahia ahia, ahụmịhe ịzụ ahịa ebe ihe ọmụma ngwaahịa na omume enyi nke onye na -ere ahịa ọdịnala na -ezute ịdị mma nke ịzụ ahịa n'ịntanetị. Ụlọ ọrụ m tọrọ ntọala, Nweta, na-enye ike ụdị iji nye ndị ọbịa saịtị ecommerce ndụ, ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe, ịzụ ahịa concierge - ya na onye ọkachamara n'ezie. Na, n'ihi mmekorita nke mmadụ a, anyị na -ahụ ka ụdị ahịa na -enweta ọnụego mgbanwe mgbanwe ahịa dị 25%. Nke ahụ na-arụ ọrụ nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere ọnụego 1 na 2% a na-enweta n'ọtụtụ saịtị e-azụmahịa.
Ọ bụ ezie na otu-pịa ịzụ ahịa na kiosks nlele onwe onye na-enye mma nke akpaaka, ndị na-azụ ahịa ka na-atụ uche ndụmọdụ na ndụmọdụ na-abịa na onye na-ere ahịa maara ihe. Mmetụta mmadụ ahụ efuola na ahụmịhe ịzụ ahịa n'ịntanetị, mana ekele maka 5G na ịgbasa bandwidth, ọ ga -ekwe omume ugbu a ịme ndụmọdụ vidiyo dị ndụ na ngwaọrụ mkpanaka nke onye ahịa wee jegharị na njirimara ngwaahịa.
Ndị a na-akpọ oku, ndị na-ere ahịa n'ịntanetị na-ewulite njikọ mmetụta uche na ndị na-azụ ahịa n'ịntanetị. Ha na -atụgharị atụmanya ka ọ bụrụ ire ahịa ma na -ejikwa ụzọ aghụghọ siri ike. Karịa ngwaahịa ma ọ bụ ọnụ ahịa, ọ bụ njikọ aka n'otu n'otu nke ọtụtụ ndị ahịa na-ahụ bụ uru ọhụrụ-gbakwunyere na ahụmịhe ịzụ ahịa ha. Nke a na -ajụ ajụjụ a, ọ bụrụ na onye na -asọmpi gị nwere ike ịnye ụdị njem ọmịiko a, ọ nwere ike wepụ ọtụtụ ndị ahịa gị n'oge ezumike a?
Ahụmahụ Ịzụ ahịa GetBEE nyere aka
'Ọ bụ oge iji mee ka ahụmịhe ịzụ ahịa maka ndị ahịa gị. Nkasi obi na mmetụta bụ akụkụ bụ isi nke ihe ịga nke ọma ahịa, na -ekpuchi isi ụzọ ndị gara aga dị ka ịnye ọnụahịa na iguzosi ike n'ihe nke ika. N'ụzọ na-emegide onwe ya, ndị na-ere ahịa na-atụkarị egwu na teknụzụ ga-anọchi ha. Nke bụ eziokwu bụ na teknụzụ enyerela aka imepụta njirimara na uru dịịrị onye na -ere ahịa, ọ ga -atọkwa ụtọ ịhụ ka ọrụ si agbanwe ka azụmahịa na -eto eto na -ewu ewu na nke ọhụrụ a. mmekọrịta akụ na ụba.
Akwụkwọ GetBee Demo
Tags: 5gecommercemmetụta ucheịzụrụ mmetụta uchenzụta mmetụta uchegbabeeotu-pịa ịzụ ahịandị na -ere ahịa n'ịntanetịịzụ ahịa n'ịntanetịonye enyemaka ịzụ ahịa n'ịntanetịonwe ndenye ọpụpụshopping
Thea C. Myrhvold bụ onye nchoputa na onye isi ụwa nke GETBee, ihe nkesa ihe ọmụma B2B nke emebere iji melite ahụmịhe ịzụ ahịa yana ịgbanwe ọdịnihu ọrụ. Site na ndekọ egwu nke mmezu na teknụzụ na ihe ọhụrụ maka ihe karịrị afọ 10, amaara ya maka idu ndú siri ike na nka nkwukọrịta nwere ikike ebumpụta ụwa iji wuo ma tụọ mmalite teknụzụ.
Ụdị Excel maka mkpocha data
Egwu… Nkezi Halloween onye ofufe na -eme atụmatụ imefu ihe karịrị $ 100 n'afọ a!